Noushamwari Mr. Steve, maneja mukuru weRedco michina yekutengesa Ltd., Canada, kushanyira kambani yedu, uye kupa nhungamiro kubasa redu.
Musi waApril 23, VaSteve, maneja mukuru weRedco michina yekutengesa Ltd., Canada, vakashanyira Cepai Group nemukadzi wavo. Liang Yuexing, maneja wezvekutengeserana wekunze weCepai Boka, nechido akamuperekedza Muna 2014 ...
Mr. GENA, General Manager weKNG Boka reRussia, akatungamira nhume kuti dzishanyire Cepai nekukurukura kubatana
Na9: 00 mangwanani muna Chivabvu 17, Mr. GENA, General Manager weRussia KNG Group Kambani, pamwe naVaRUBTSOV, technical Director, naVa Alexander, Executive Director, vakashanyira Cepai Boka ndokukurukura kubatana. Achiperekedzwa naZheng Xueli, maneja wekunze kutengeserana depa ...
Babu chirongwa chiri kufambira mberi kupisa munaKurume 28, 2019
Musi waKurume 28, VaWael naVaThomas, vatungamiriri vaviri veiyo chirongwa cheUae Azabia Petroleum Company (ADNOC), naVaLi Jiqing, mukuru wezvekutenga pasi rose kweChina Petroleum Engineering uye Construction Co., LTD. (CPECC), akauya kukambani kuzotsinhana maonero uye kutungamira iyo wor ...
Adabia chirongwa chakatangwa zviri pamutemo munaKurume 25, 2019
Musi waKurume 25, VaPramod, mukuru wezvekutengwa kweUae Azabia Petroleum Company (ADNOC) naVaHossam, mukuru weHurumende yeARCHIRODON, vakashanyira nhumwa dzekuMadokero kuzoongorora nekushanyira chirongwa cheAdabia. Mr. Liang Guihua, sachigaro weECPAI Boka, akatungamira iyo yekunze trad ...